Nesorin’ny SourceForge Ny Lamba Nandrakotra · Global Voices teny Malagasy
Nesorin'ny SourceForge Ny Lamba Nandrakotra
Voadika ny 11 Janoary 2019 5:40 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2010)
Tamin'ny Janoary lasa teo, tamin'ny andro izay nanaovan'i Hillary Clinton, Sekreteram-panjakana amerikàna, kabary momba ny fahalalahan'ny aterineto, nobahanan'ilay vondrom-piarahamonin'ny loharano misokatra, SourceForge, ny fahafahana miditra ho an'ireo mpisera ao Sodàna, Siria, Iràna, Kiobà ary Korea Avaratra, tafiditra ao anatin'ny ezaka hifandrindra amin'ny fepetra amerikàna momba ny fanondrànana harena sarobidy any amin'ireny firenena ireny .
Tezitra ireo olontsotra mpampiasa aterineto, ary novalian‘ireo Siriàna bontana tamin'ny alàlan'ny fanoratana bilaogy momba ireo fepetra, sy tamin'ny fiantsoana ny fanahin'ny fandraharahana ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina. Ankehitriny, roa herinandro aty aoriana, nanambara fanovàna iray tao anatin'ireo fepetra ireo ny SourceForge, izay mety hanome fizakantena be kokoka an'ireo tetikasa ampiantranoina ao amin'ilay tranonkala. Ao amin'ny bilaogy ofisialin-dry zareo, nanazava ny SourceForge :
Niteraka fanehoankevitra nivaivay sy hatezerana avy amin'ireo izy voakasiny ny hetsika nataonay, ary avy amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy. Saingy na renay aza ny hiakan-katezeranareo, andàlana mikaroka izay marimaritra azo raisina izahay – ary mino fa hahita.
Tsy misy mihitsy fomba hahafantaranay marina hoe itsy tetikasa itsy, na iroa, no mitondra mankany amin'ilay fibahanana. Saingy ireo mpitantana ny tetikasa tsirairay no tsara toerana afaka handray ny fanapahankevitra tahaka izany – noho izany dia apetrakay ho eo am-pelatanan-dry zareo izay fahefana izay.
Manomboka izao, ireo mpitantana ny tetikasa tsirairay dia afaka manindry ny bokotra Develop -> Project Admin -> Project Settings mba hahitàny ilay toko iray antsoina hoe “Export Control“. Ny tonga dia mipetraka ao, dia ireo fepetra tena somary henjankenjana no napetrakay. Raha heverinao fa “tsy” tafiditra amin'ilay resaka ny tetikasanao, na fanakanana hafa mifandraika amin'izany, azonao atao izao ny mikitka ilay bokotra iray hafa fisafidianana sy mikitika ny “Update“. Aorian'izay, izay rehetra mampiasa dia ho afaka hitroka ireo failo momba ny tetikasanao toy izay efa nataon-.dry zareo tany alohan'ilay fanovàna tamin'ny volana lasa.
Izahay ato amin'ny SourceForge dia manaja tanteraka ireo idealin'ny rindrambaiko manana loharano misokatra sy malalaka, anisan'izany ny fotokevitry ny fifanakalozana torohay amin'ny fomba malalaka. Ekenay fa, ho an'ny olona sasany, mampametra-panontaniana momba ny maha-mitombina ny fanohananay ireo fanovàna natao tsy ela akory teto amin'ny tranonkala. Ireo fanovàna naparitakay androany dia mikendry ny hanamafisana ny tetikasanay sy hankasitrahana ny fitokisanareo tsy tapaka.
Ho hita eo hoe hatraiza no fiantraikan'ilay stratejia vaovaon'ny SourceForge any amin'ireo mpampiasa azy, sy ny hoe firy ireo tetikasa no hisafidy ny hanàla ireny fepetra maneritery ireny, fa hatreto aloha, faly ireo mpampiasa fa niverina afaka niditra ao amin'ilay tranonkala indray.
3 herinandro izayFitantanam-pitondrana